Archives fahamarinana - Sword sword sy Crown
Ianao ve ny "an'ny" fahamarinana?
Oktobra 31, 2018 sklindsey
Moa ve ianao "avy amin'ny" Fahamarinana? Jesosy dia nilaza mazava tamin'i Pilato fa ny fanjakany dia tsy "avy" amin'ity tontolo ity, fa tsy "avy" eto. Avy eo dia nanontany an'i Jesosy i Pilato - "Ary hoy Pilato taminy: [...]
Jesosy… io anarana io ambonin'ny anarana rehetra
Enga anie 23, 2018 sklindsey
Jesosy… io anarana io ambonin'ny anarana rehetra Nanohizan'i Jesosy ny vavaky ny mpisoronabe sy ny fifonana nataony tamin'ny Rainy - "'Efa nasehoko tamin'ny olona nomenao Ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Ry zareo dia [...]
Jesosy no "Fahamarinana"
Aprily 14, 2017 sklindsey
Jesosy no “fahamarinana” Talohan'ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, dia nanontany azy i Tomasy, iray tamin'ny mpianatr'i Jesosy - "Tompoko, tsy fantatray izay alehanao, ary ahoana no ahafantaranay ny lalana?" Namaly azy i Jesosy [...]
Tena miova ve ny antokom-pivavahana taloha sa manjavona? March 15, 2021
"Mpitondra fivavahana" Dave McKay dia alika antitra izay mampiasa hafetsena taloha izay nianarany tamin'ireo mpitondra fivavahana efa antitra aza March 10, 2021